चीनमा यसरी झल्कियो नेपाल, चिनियाँहरु दंग, नेपालको प्रचारप्रसार गर्न चीनमा यस्तो !Nepal-China. | Public 24Khabar
Home International चीनमा यसरी झल्कियो नेपाल, चिनियाँहरु दंग, नेपालको प्रचारप्रसार गर्न चीनमा यस्तो !Nepal-China.
चीनमा यसरी झल्कियो नेपाल, चिनियाँहरु दंग, नेपालको प्रचारप्रसार गर्न चीनमा यस्तो !Nepal-China.
उनले भने, “श्रद्धाको बिहे गर्ने उमेर भएको छैन । उनी अझै सानै छिन् । उनले जिबनमा धेरै गर्न र धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।” अभिनेत्री श्रद्धा र नेपाली व्याइफेन्ड रोहन श्रेष्ठ बाइकमा हिडिरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बलिउडमा सुटिङ सुरु हुने चर्चा सुनिन थालेको छ । भारतीय अनलाईन पिंकभिल्लाले यस्को बारेमा शक्त्ति कपुरसँग बुझ्न खोजेको थिए । यही सन्दर्भमा उनले कोरोना पुर्णरुपमा निर्मुल नभएसम्म छोरीलाई सुटिङमा नपठाउने पनि बताएका छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
रोहनको जन्म भारतको मुम्बईमा भएको हो । उनले न्यूयोर्क फिल्म एकेडेमीमा अध्ययन गरेका थिए । उनले बुवाको पेशालाई पछ्याउँदै आफू पनि यही क्षेत्रमा स्थापित भए । रोहनले फिल्मफेयर, इन्डिया जिक्यू, फेमिना, कस्मोपोलिटन, पिपल आदिका कभर फोटोसुट गरिसकेका छन् । उनले बलिउडका शीर्ष कलाकारको फोटोसुट पनि गरिसकेका छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous articleJyoti Magar को घरमा पुग्दा भेटिए यत्ती ठुलो छोरा,कलाकारिताबाटै काठमाडौंमा ठड्याइन् यत्ती ठुलो महल
Next articleएलिना को गीतमा रमेश भए फिदा दसैमा नि गरे कल्पना कै तारिफ